Ma ogtahay inay jireen dad daawasho daraadeed debedaha loo dhoofin jirey - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Ma ogtahay inay jireen dad daawasho daraadeed debedaha loo dhoofin jirey
Bishii Maarso ee sannadkii 1914 dekedda Ellis Island ee New York waxaa ku soo xidhay markab la yidhaahdo S.S. Havre oo dalka Faransiiska ka yimid. Shaqaalihii dekedddu wax ay diiwaangaliyeen 60 qof oo is ku qolo ah oo la qeexi kari waayay ujeeddada ay Maraykanka u yimaaddeen: qaxooti ma ahayn, dalxiis ma ahayn, shaqo-tag ma ahayn, wafdi ma ahayn, duullaan ma ahayn… Wax loo qoro waa la garan waayay. Dadkaasi Soomaali bay ahaayeen.
Maalintaa maalin aad u ga yara horraysay niman caddaan ah baa tagay gobolka Siti ee Soomaalida Itoobbiya, wax ayna la shireen niman Ciise ah. Waxaa la ga wada hadlay fursad shaqo oo ah in loo baahan yahay dad Soomaali ah oo la geeyo Yurub iyo Maraykan kuwaas oo lacag la gu daawan doono iyaga oo bandhigaya dadka ay yihiin iyo dhaqankooda. La ga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii 19-aad waxaa soo baxay niman reer Yurub ah oo habkaa u shaqaysta oo dadyawga dunida oo dhan Yurub keena.
Dadyawga waxaa la gu daawan jiray madxafyada iyo meelo kale iyaga oo isu ekaysiinaya sidii ay dhulkooda u gu dhaqnaayeen. Dadkaa intooda dib u soo noqotaa waxoogaa lacag ah bay dalka la iman jireen.Soomaalidan reer Siti haddaba sidaas bay Jabbuuti u ga dhoofeen oo Faransiiska ku tageen. Halkaas baa Maraykan loo ga sii gudbiyay. New York, San Francesco iyo Chicago ayaa la gu daawaday. Dabadeed bishii Ogos kooxdii Soomaalida ahayd iyo Caddaankii la shaqaysanayay muran baa dhex maray waana la dagaallamay.
Kolkaas baa Soomaalidii la gu xareeyay saldhigga bilayska Clark Street police station. Goortaas bay dadkan arrintoodu taariikhowday oo saxaafaddu baahisay.Waan ka xumahay in ay i ga luntay xog intan ka badan oo aan dadkan ka hayay, waanan jeclaan lahaa cid Maraykanka joogtaa in ay taariikhdaa sii baadho.
Sawirka kowaad ninka timaha weyn ee bidix fadhiyaa waa Axmed Mire oo qaba Cabla Nuur, ninka kale ee isaguna timaha weyn ee midig fadhiyaana waa Xareed Bahdoon, meeshuna waa saldhiggii bilayska.
WQ: Ibraahin Hadw Yuusuf
Previous articleUS journalist Bilal Abdul Kareem files Supreme Court petition over ‘kill list’ lawsuit
Next articleHadalka Churchill u ekaa mabda’a Soomaalida maanta
Safiirka iyo Soomaalilaan.
B.	Britian & Somaliland
Mid ka mida cabiraadii riyooyinka Ibna Siiriin